I-Pebble Cottage e-Kessingland nr Southwold
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Andrew + Bridget
Le ndlu yabadobi be-boutique cishe ebangeni elingama-200m ukusuka ogwini ilungele ukubaleka komndeni, noma kumbhangqwana odinga indawo eyengeziwe ukuze ubuyele emuva futhi uphumule ukuze uthole ikhefu lothando. Isisekelo esihle sokuvakashela iSouthwold, Beccles neHalesworth.
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna iholide lehlobo lenani elihle eduze nolwandle olumangalisayo nezindunduma zase-Kessingland noma ikhefu lasebusika elithokomele, i-Pebble Cottage izokunikeza umuzwa wokuphumula lapho ungena emnyango.
I-Cottage inokuzizwa ithokomele futhi ivulekile kuyo ngesikhathi esifanayo. Ukuhlobisa kwenziwe ezingeni eliphezulu lokuklama kwangaphakathi. Phezulu kunamakamelo okulala angu-3 ( 1 Double, 1 Twin kanye negumbi lezingane elinombhede owodwa + wokudonsa).
Phansi unegumbi Lounge, igumbi lokudlela elihlukile kanye nekhishi elihlome ngokuphelele.
IBathroom linendlu yangasese, indishi kanye neshawa enkulu.
Indlu ifudunyezwa nge-radiator ekamelweni ngalinye.
Ingadi engemuva ibamba ilanga lasekuseni nelantambama, kuyilapho ingadi yangaphambili iyisicupho sangempela selanga kusihlwa.
4.92(142 okushiwo abanye)
4.92 · 142 okushiwo abanye
I-Kessingland inezindawo zokuphuza ezimbili, indawo yokudlela (I-Waterfront), ikhefi (ebhekene ngqo nePebble Cottage) futhi ingasaphathwa ezitolo ezimbili zezinhlanzi nezama-chip. Uma ukhetha inketho yokuziphekela, iyi-Coop egcwele ngokugcwele enemizuzu emi-2 ngokushayela.
Ibungazwe ngu-Andrew + Bridget
Sihlala emgwaqeni ofanayo ne-Pebble Cottage, ngakho-ke singatholakala ngesikhathi esifushane, kodwa sincamela ukukushiya ujabulele ukuhlala kwakho ngaphandle kokuthi siphazamise.
UAndrew + Bridget Ungumbungazi ovelele